Izindaba - Izizathu nezinzuzo zekhithi yokuhlinza eyenziwe ngezifiso
I-OEM ne-ODM Operation Pack
AmaKhithi Wokugqoka Nezinqubo Ezincane
I-Anesthesia High Polymers
Alahlwayo plastic isampula inkomishi
Isitsha sokuqoqa igazi esilahlwayo
Alahlwayo igciwane isampula tube
Izizathu nezinzuzo zekhithi yokuhlinza eyenziwe ngezifiso
Izizathu Nezinzuzo Zekhithi Yokuhlinza Ngezifiso
Ikhithi yokuhlinza eyenziwe ngokwezifiso iqukethe imishini yokusebenzisa eyodwa, ebalulekile kodokotela bezokwelapha ukwenza imisebenzi. Wonke lawa madivayisi agcwele ukupakisha okuyinyumba futhi athunyelwe egumbini lokuhlinza. Imboni yamadivayisi wezokwelapha ibambisana nodokotela nabanye odokotela ekwakheni nasekuhambiseni amaphakheji okuhlinza ngesikhathi esifanele nangempumelelo. Ikhithi yokuhlinza inezinto ezikhethiwe, kufaka phakathi: amathawula emigodi yokuhlinzwa, ama-swabs wokuhlinzwa, ama-sutures, izindwani zokuhlinza nokugqokwa kwamanxeba. Ingafaka nemishini ekhethekile njengama-catheters enhliziyo kanye nokufakelwa. Kunezinzuzo eziningi ngokusebenzisa ikhithi yokuhlinza eyenziwe ngezifiso. Nazi izizathu ezinhlanu zokuthi kungani kufanele ucabangele ukusebenzisa ikhithi yokuhlinza eyenziwe ngezifiso.
Ngokwenza odokotela basebenze kahle futhi ngaleyo ndlela benze izinqubo eziningi, amakhithi okuhlinza abalulekile ukukhiqiza izindlela ezonga imali. Ucwaningo oluningi lukhombisile ukuthi ukusebenza kwansuku zonke kwezikhungo zezokwelapha ezishintshele kumakhithi okuhlinza kukhuphuke ngama-30-40%. Njengoba izibhedlela kungadingeki zigcine inani elikhulu lezinto zokwelashwa, ezingadala ukuthi ulayini wokukhiqiza uhambe kancane, ukuphathwa kwezindleko kuba lula. Lokhu kusiza umuntu ophetheyo ukuthi abale izindleko zokulethwa ngokunembe kakhudlwana. Amakhithi wokuhlinza anciphisa izindleko zokuphatha ngokunciphisa isikhathi esidingekayo soku-oda nokugcina amathegi ezimpahla.
Isikhathi esichithwa ngabasebenzi ekulungiseleleni nasekukhetheni imishini yezokwelapha yokusebenza okuhlinzekwe sincishisiwe kakhulu, futhi ingcindezi nesikhathi sokusungula imitholampilo yemitholampilo naso sinciphile. Ngokunciphisa isisekelo sokunikezela, okungukuthi, ukuvumela abahlinzeki abaningi ukuthi banikeze abahlinzeki abahlukahlukene, abahlinzeki bezokunakekelwa kwempilo bangonga isikhathi sokuphatha, futhi nesikhathi esigciniwe singasetshenziselwa ukunakekelwa kweziguli.
Ikhithi yokuhlinzeka inikela ngemishini efanele ngesikhathi esifanele, ukumiswa okulungile nendawo efanele. Ukupakisha okuhlinzekwayo kuhlinzeka zonke izingxenye zephakeji elilodwa eliyinyumba, ngaleyo ndlela zinikeze ukulawula okufanele kwe-aseptic nokwenza iziguli zingabi sengozini yokutheleleka okuhlobene nokunakekelwa kwempilo. Ngokwandisa ukwedlula kweziguli nokunciphisa isikhathi sokuphendula, amakhithi okuhlinza angathuthukisa ikhwalithi yesevisi.
Njengoba zonke izinto zihlanganiswe ndawonye, ​​ukulandeleka kwamaqoqo kwenziwa lula. Ngenxa yokusetshenziswa kabanzi kwamakhithi okuhlinza, izinhlangano eziningi ezisebenzisa izinto zokuhlinza zenze izinqubo eziningi zasebenza ngendlela efanele, ngaleyo ndlela zithuthukisa ikhwalithi. Abahlinzeki bezokunakekelwa kwezempilo bangathuthukisa kalula imihlahlandlela ukuze bazihlole kahle ngokuya ngemigomo ebekiwe engathathwa njengeqinile kakhulu.
Inani lemfucuza elenziwe yiyunithi lingancishiswa lifike kuma-50%.
5. Thuthukisa ukusebenza kahle
Ukusebenza kahle okuphezulu kusho ukuthi isikhathi sokulungiselela side kakhulu, ngakho-ke izinqubo eziningi zingaqedwa ngosuku. Inganciphisa isikhathi sokulinda sesiguli, futhi ingangena ngaphambi kwesikhathi
Isikhathi Iposi: Jun-08-2021
IHENAN ZHANCHENG TRADING COMPANY yasungulwa ngonyaka we-2016 futhi itholakala eZhengzhou City, eSifundazweni saseHenan, okuyisisekelo esikhulu se-eisai emhlabeni ...
Igumbi D26, No.25 isakhiwo, No. 23 changchun umgwaqo, zobuchwepheshe wesifunda, zhengzhou idolobha, isifundazwe henan, China